အိုဘာမားသမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်တရုတ်၊ကိုးရီယားနှင့်အီးရန်တို.ကအမေရိကန်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုပိုမိုလုပ်လာ၊ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	အိုဘာမားသမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်တရုတ်၊ကိုးရီယားနှင့်အီးရန်တို.ကအမေရိကန်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုပိုမိုလုပ်လာ၊	March 13, 2009
မြောက်ကိုးရီယားအတွက်တော့၊အမေရိကန်အစိုးရကြောင့်၎င်းတို.လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာကြာလှပါပြီ၊မြောက်ကိုးရီယားအထီးအကျန်ဖြစ်အောင်၊နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုများပိုမိုလုပ်လာအောင်အမေရိကန်ကရှေ.ဆောင်ပြီးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို.သတ်မှတ်ထားပါသည်၊ဒါကြောင့်၊အမေရိကန်ပြိုကွဲခြင်းကိုလိုလာနေတဲ့နိုင်ငံအထဲမှာကိုးရီယားကအပါအဝင်ဖြစ်နေတယ်၊အထူးသဖြင့်၊မြောက်ကိုးရီယားက နျူကလီယားလက်နက်ထုတ်လုပ်စမ်းသပ်မှုနဲ.ပတ်သက်၍ အမေရိကန်အစိုးရနဲ.မကြာခဏပြဿနာတက်သဖြင့်နာမည်ဆိုးတံဆိပ်အမျိုးမျိုးအတပ်ခံရပြီးနိုင်ငံတကာအလယ်မှာမျက်နှာ ပျက်၊နာမည်ပျက်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသည်၊ကိုယ့်တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုအတွက်အနဲငယ်သာလုပ်နိုင်ခဲ့သည်၊
အီးရန်နိုင်ငံကတော့၊ အမေရိကန်ဟာ အာရပ်နိုင်ငံများအတွက် မဟာရန်သူကြီးလို.မြင်ထားပါသည်၊အခြေခံကတော့ ဘာသာရေးကြောင့်ပါ၊ အာရပ်နိုင်ငံများအကွဲအပြဲဖြစ်အောင်၊မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်လာအောင် အမေရိကန်ကဖန်းတီးနေတယ်လို.ယုံကြည် ထားပါသည်၊ အာရပ်နိုင်ငံများကိုအမေရိကန်ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး သူတို.၏နေ.တိုင်နေထိုင်မှုဘဝ၊ဘာသာရေး၊ယဉ်းကျေးမှုတွေကိုဖျက်စီးပြီးအနောက်နိုင်ငံများ၏ယဉ်းကျေးမှုတွေကိုတင်သွင်းနေတယ်လို.ပြောနေပါတယ်၊ပြီးတော့၊အီးရန်ကအေစ္စရေလ်ကိုအာရပ်မြေပုံထဲကနေပျောက်သွားအောင်လုပ်မယ်လို.ခဏခဏခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်က အေစ္စရေလ်ကို စစ်ရေးတောင်းတင်းလာအောင်စစ် ရေးအထောက်အကူပြုလက်နက်ပစ္စည်းများနှင့်နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိအောင်သံတမန်ရေးရာမှာအကူအညီများပေးနေတာကိုအီးရန်အ တွက်လုံးဝဒေါပွားစရာအချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်နေပါသည်၊
စကားမစပ်ပြောရအုံးမယ်၊အင်းအားကြီးနိုင်ငံများအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗမာစစ်အစိုးရကအကွက်ကောင်းရှာပြီးအာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက်သူတို.အပေါ်စီးပွားရေးအရပိတ်ပင်ပြီးသံတမန်ရေးအရအမြဲဝေဖန်ရှုတ်ချမှုများပြုလုပ်နေသောအမေရိကန်ကိုမလိုလာတဲ့နိုင်ငံအထဲမှာဗမာစစ်အစိုးရကပါဝင်လာသည်၊တရုတ်နဲ.အပေးအယူလုပ်သလိုလို၊ကိုးရီယားနဲ.စစ်ရေးနည်းပညာများဖလှယ်သလိုလို၊ရုရှားနဲ.လည်းစစ်ရေးနည်းပညာများအချိန်မရွေးဝယ်ယူနိုင်ပြီးရုရှားကနောက်ကွယ်ကနေအာကာအကွယ်ပေးနေသလိုလိုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံများဖြစ်သောအာရှနိုင်ငံများနှင့်အမေရိကန်နှင့်အနောက်နိုင်ငံများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်းရေးလုပ်နေပါတယ်၊အင်းအားကြီးနိုင်ငံများကသူတို.ပြည်သူပြည်သားများ၏အကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးစစ်ရေး။နိုင်ငံရေးနှင့်နည်းပညာရေးရာများတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗမာစစ်အစိုးရက ကိုယ့်ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုဆက်လက်ဖိနှိပ်ရမလဲ? ကိုယ့်အာဏာတည်မြဲရေးနှင့်ကောင်းစားရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?စတဲ့အချက်များတွေကလွဲရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုအတွက်ဘာမှစိတ်မဝင်စားပါ၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နောက်ဆုံးအနေနဲ. အကောင်ကြီးမားသောဆင်တစ်ကောင်ကိုအပ်အချောင်းများစွာဖြင့်ထိုးသတ်သော်လည်းလွယ်လွ ယ်လေးနဲ.မသေနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဗမာစစ်အစိုးရအတွက်စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ပါ၊အမေရိကန်အစိုးရကို ဝိုင်းထိုး နှက်တဲ့နိုင်ငံများဟာ အသံကျယ်ပြီး ထိုးနှက်နိုင်စွမ်းအားနဲတဲ့လက်သီးများဖြင့်ထိုးနှက်နေပါသည်၊ ထို.ထိုးနှက်နိုင်စွမ်းအားနဲသောနိုင်ငံများကိုအားကိုးပြီးကိုယ့်ကြီးပွားရေးအတွက်အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲမှာမူလဲနေသောဗမာစစ်အစိုးရအနေနဲ.အချိန်မနှောင်း ခင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍ပြည်သူလူထုနှင့်တိုင်းရင်းသားများလက်ခံနိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ပေးနိုင် ရင်ကောင်းပေစွ၊
အမေရိကန်အတွက် ကံမကောင်းအကြောင်းမလှကိုဘက်စဉ်းစားသော်၊ လက်ရှိသမ္မတအိုးဘာမားသည် အမေရိကန်သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးလူမည်သမ္မတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အမေရိကန်ပြိုကွဲရေးလိုလာသောနိုင်ငံများက စီးပွား ရေးကပ်ဆိုက်နေတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသမ္မတကိုလုပ်ကြံလိုက်ရင်အမေရိကန်မှာလူဖြူလူမည်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာနိုင် သည်၊ဤအရေးကြီးနေသောအချိန်မှာအကယ်၍အသားအရောင်ခွဲခြားသောစစ်ပွားပြန်ဖြစ်ရင် အမေရိကန်နိုင်ငံကပြိုကွဲကော င်းပြိုကွဲပါလိမ္မည်၊1991ခုနှစ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲခင်မှာဆိုဗီယက်ပြိုကွဲလိမ္မည်လို.နိမိတ်ဖတ်ပြောခဲ့တဲ့လူတွေအထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတ ရိုနဲလ်ရဲဂဲင်းလည်းတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်၊